musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Chicken Burgers naLongo Zvino Akarangarira
Belmont Meat Products Ltd. iri kurangarira zita reLongo Chicken Burgers kubva kumusika nekuti rinogona kunge riine zai risina kuziviswa pachinyorwa. Vanhu vane allergies kune zai havafanire kudya chigadzirwa chakayeukwa chinotsanangurwa pazasi.
Chigadzirwa chinotevera chakatengeswa muOntario.
Longo's Chicken Burgers 852 g (6 x 142 g) 7 72468 03418 6 Zvakanakisa Pamberi 2022 MR 09 2022 MA 13 2022 JN 28
Kana uine allergies kune zai, usadye chigadzirwa chayeukwa nekuti chinogona kukonzera hosha kana hupenyu hwehupenyu.
Kurangarira uku kwakakonzerwa neCanadian Chikafu Inspection Agency (CFIA) bvunzo mhinduro. CFIA iri kuita ongororo yekuchengetedzwa kwechikafu, izvo zvinogona kutungamira mukuyeukwa kwezvimwe zvigadzirwa. Kana zvimwe zvigadzirwa zvine njodzi zvakanyanya zvikarangarirwa, iyo CFIA inozivisa veruzhinji kuburikidza neyakagadziridzwa Chikafu Recall Nyevero.
Reactions Pakave pasina kutaurwa maitiro ane chekuita nekushandiswa kweiyi p